Vaovao - Torohevitra ho an'ny Noely 2020
Torohevitra ho an'ny Noely 2020
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​tena tsy hitovy ny Krismasy amin'ity taona ity. Amin'ity lahatsoratra ity dia manome torohevitra fototra 5 izahay hanampiana ny fahasalamanay mandritra sy aorian'ny fetin'ny fialantsasatra 2020.
Isan'andro, ny mpahay siansa dia mianatra bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny SARS-CoV-2, ary ny vaksinina dia mihodina. Eny, sarotra ny 2020, saingy, amin'ny fikarohana ara-pitsaboana ao amin'ny fitaovam-piadianay, handresy ny COVID-19 izahay.
Na eo aza izany, alohan'ny handresentsika ny COVID-19, dia mila mihazona fanajana izany hatrany isika. Nahazo toro-hevitra vitsivitsy eto ambany izahay mba hahasalama anao:
Tsy misy lahatsoratra momba ny fitandroana ny fahasalamana ara-tsaina ho feno raha tsy miresaka momba ny torimaso. Tsy omentsika azy io ny toerana ilainy ao amin'ny tontolontsika maoderina sy misy hazavana. Mila manao tsaratsara kokoa isika rehetra.
Ny fahaverezan'ny torimaso dia manelingelina ny fihetsitsika. Ity dia intuitive, saingy tohanan'ny fikarohana ihany koa. Ohatra, ny famintinana iray dia namintina hoe: "Ny fahaverezan'ny torimaso dia manatsara ny fiatraikany ratsy amin'ny fihetsiketsehana manakorontana ary mampihena ny vokatra tsara ateraky ny hetsika manatsara ny tanjona."
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha tsy ampy torimaso isika dia mety hahatsapa ho ratsy rehefa tsy mandeha ny zavatra, ary tsy dia mahazo aina isika rehefa mandeha tsara.
Toy izany koa, ny fandinihana iray hafa dia nahatsikaritra fa “ny olona sasany lasa mora tezitra ary tsy dia misy vokany firy ny vokany aorian'ny torimaso fohy.” Indray mandeha ihany, ny fihenan'ny faharetan'ny torimaso dia toa mampihena ny toe-po.
Amin'ny fotoana mahakivy ny toe-tsain'ny firenena, ny torimaso kely fanampiny dia mety ho fomba tsotra iray hampandehanana ny mizana hahasoa antsika.
Tsara anefa ny manamarika fa ny fifandraisana misy eo amin'ny torimaso sy ny fahasalamana ara-tsaina dia sarotra sy mandeha roa - ny olana ara-pahasalamana dia mety hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny torimaso, ary ny tsy fahampian'ny torimaso dia mety hanimba ny fahasalaman'ny saina.
2. Miasa hatrany
Toy ny torimaso koa, izay lahatsoratra rehetra mikendry ny fanamafisana ny fahasalamana ara-tsaina dia tsy maintsy atao fanatanjahan-tena. Rehefa milatsaka ny mari-pana dia mety ho lasa sarotra kokoa ny fanerena ny tenantsika any ivelany. Nasehon'ny mpahay siansa fa ny fampihetseham-batana dia mety hampisondrotra ny toe-tsaina amin'ny fotoana fohy sy maharitra.
Ny famerenana navoaka tamin'ny taona 2019, ohatra, dia nahita fifandraisana teo amin'ny fitambaran-taolana kardiorespiratory sy ny loza mety hitranga amin'ny aretin-tsaina mahazatra. Toy izany koa, ny fanadihadiana natao tamin'ny meta tamin'ny taona 2018 dia nanatsoaka hevitra fa "ny porofo misy dia manohana ny fiheverana fa ny fampihetseham-batana dia afaka manome fiarovana amin'ny fisehoan'ny fahaketrahana."
Zava-dehibe dia tsy mila mihazakazaka kilaometatra 4 minitra isika mba hahazoana tombony ara-tsaina amin'ny fampihetseham-batana. Ny fandinihana natao tamin'ny taona 2000 dia nahatsikaritra fa ny fandehanana an-tongotra fohy, 10-15 minitra dia nampitombo ny toe-po sy ny fitoniana.
Ka na dia zavatra tsotra aza izy io, toy ny mandihy ao an-dakozia na mandeha an-tongotra kely kokoa ny alikanao dia maninona izany rehetra izany.
Marina fa na ny fampihetseham-batana na ny torimaso dia tsy mahasolo fifamihinana avy amin'ny namana na havantsika, fa raha mampisondrotra vetivety ny toe-pontsika isika na miakatra ny toe-tsaina antonony ankapobeny dia mety hanampy antsika hitantana ny fahadisoam-panantenana tsaratsara kokoa izany ary hamerenantsika izao taona sarotra izao.
Fantaro hatrany ny momba ny COVID-19
Raiso ny vaovao farany sy ny fampahalalana tohanan'ny fikarohana momba ilay virus coronavirus mivantana mankany amin'ny boaty.
3. Fiatrehana ny fanirery
Ho an'ny olona maro, ny fanirery dia efa nampiavaka ny taona 2020. Ny fisaintsainana ireo namana sy fianakaviana mandritra ny vanim-potoanan'ny Noely dia mety hampitombo ireo fahatsapana mitokantokana ireo.
Mba hiadiana amin'izany dia miezaha hifandray. Na antso an-tariby tsotra na firesaka amin'ny horonan-tsary izany dia manorata resadresaka fidirana ao. Tadidio fa tsy ianao irery no mahatsiaro manirery. Raha azo antoka sy azo atao ao amin'ny faritra misy anao izany dia mihaona amin'ny namana any ivelany any ary mandehandeha.
Hamarino amin'ny hafa - ny mailaka, ny lahatsoratra ary ny haino aman-jery sosialy dia mety hahasoa amin'ny fotoana toy izao. Aleo mandidy hoe "Manao ahoana ianao? Fa tsy mikorontana." amin'ny olona malahelo anao. Mety malahelo anao koa izy ireo.
Mijanona foana. Afaka mihetsika miadana ny fotoana tsy misy dikany. Mitadiava podcast vaovao, henoy ny hira vaovao na taloha, raiso io gitara io, manomboka manorata sary indray, mianatra fahaiza-manao vaovao, na zavatra hafa. Ny saina mibahana sy mirona dia tsy dia miompana amin'ny fanirery.
Ny fanadihadiana natao vao haingana dia nahitana fa ny olona mirotsaka amin'ny lahasa mahafinaritra sy miditra amin'ny toetry ny fivezivezena dia tsara kokoa mandritra ny fanidiana sy ny quarantine. Manoratra ny mpanoratra:
"Ireo mpandray anjara izay nitatitra ny fikorianany bebe kokoa dia nitatitra fihetsem-po tsara kokoa ihany koa, soritr'aretina ketraka tsy dia henjana, tsy dia manirery, fihetsika salama kokoa, ary fihetsika tsy salama vitsy."
4. Mihinana sy misotro tsara
Ny Krismasy dia mifandray amin'ny ampahany kely amin'ny fimamoana tafahoatra. Heveriko fa tsy ara-drariny na mitombina ny manantena ny olona, ​​amin'ny taona 2020 amin'ny taona rehetra, hampihena ny fihinanana turkey.
Miaraka amin'io voalaza io, misy porofo mitombo fa izay fihinanantsika dia misy fiatraikany amin'ny toetrantsika. Ohatra, ny famerenana vao haingana izay hita tao amin'ny BMJ dia namarana:
"Ny fomba fihinanana sakafo ara-pahasalamana, toy ny sakafo Mediteraneana, dia mifandray amin'ny fahasalamana ara-tsaina tsara kokoa noho ny fomba fihinan-kanina" tsy salama ", toy ny sakafo tandrefana."
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ny fiantohana fa misakafo tsara alohan'ny mialoha sy ny andro aorian'ny Krismasy dia afaka manampy antsika hanana saina tsy miova.
Manantena ny toplines tohanan'ny siansa momba ny tantarantsika tsara indrindra isan'andro. Tsindrio ao ary tazomy ny fahafaham-pahalalanao.
5. Ampifanaraho ny zavatra andrasana
Tsy ny olona rehetra no eo amin'ny pejy iray ihany raha ny areti-mandringana no resahina. Ny olona sasany mety mbola miaro, raha ny hafa kosa mety ho resin'ny "harerahana amin'ny areti-mandringana" ary hiverina amin'ny ara-dalàna alohan'ny fotoana. Ny sasany kosa mety mbola mampiasa teny toa ny "scamdemik" ary mandà tsy hisaron-tava.
Ny sasany amin'ireo fianakaviana dia mety manosika hisakafo ara-pianakaviana, toy ny andro lavitra tamin'ny taona 2019. Ny hafa, amin'ny fomba mazava, dia mety maka sary an-tsaina ny drafi-pisakafoana miorina amin'ny Zoom.
Ireo fahasamihafana eo amin'ny toerana ireo dia mety hiteraka fahakiviana sy fihenjanana fanampiny. Zava-dehibe ny fifanakalozan-kevitra mazava sy mazava amin'ny mpianakavy momba izay antenain'izy ireo amin'ity taona ity.
Aza adino, amin'ny vintana rehetra, ny Krismasy ho avy dia hahita fiverenana amin'ny endrika mahazatra. Antenaina fa tsy hiaritra an'io Krismasy tsy mahazatra sy tsy mahazo aina io indray mandeha fotsiny isika. Raha tsy mahazo aina amin'ny drafitra aroson'olona ianao dia lazao hoe “tsia.” Ary mifikitra amin'ny basy.
Miaraka amin'ny tsimok'aretina raha toa ka misy isa manerana an'i Etazonia, ny safidy mety indrindra dia ny mametra ny fifandraisan'ny olombelona araka izay tratra.
Na dia miovaova arakaraka ny faritra aza ny lalàna, ny lalàna ary ny lalàna, rehefa tonga any io dia samy manapa-kevitra ny tsirairay avy ny amin'ny fomba fandraisan'izy ireo ao anaty lalàna. Mba hiarovana ny fahasalamanao manokana dia manapaha hevitra ianao ary aza avela hidina an-dalambe hanao zavatra izay heverinao fa mampidi-doza loatra.
Ny fomba azo antoka indrindra hankafizana Krismasy amin'ity taona ity, indrisy, ny fanaovana azy io saika.
Ilay entina mody
Isaky ny manokana, ireo torohevitra voalaza etsy ambony dia tsy afaka manolo ny fotoana tsara antenaintsika amin'ny Krismasy. Na izany aza, raha miezaka bebe kokoa isika mba hihinana tsara, hatory tsara ary hifindra, dia mety ho ampy ny fiangonam-bokatra mba hahazoana tombony kely.
Tadidio fa eo an-trano mahitsy isika. Mankanesa any ivelany ary miresaha amin'ny namana sy fianakavianao raha kivy ianao. Ny mifanohitra amin'izany dia ny fahatsapany ho ambany ihany koa. Aza matahotra mihitsy miresaka momba ny fihetsem-ponao. Tsy misy olona manana ny fialantsasatra nandrasan'izy ireo.
Manafatra fanandramana alàlana any an-trano Covid-19
Raiso ny tombana amin'ny Internet mba hahitana raha mahafeno fepetra amin'ny Covid-19 ao an-trano fitsapana ianao.
Farany, firariana tsara indrindra avy aminay!
Mirary Krismasy milamina, feno fifaliana ary salama ho anao izahay!
Fotoana fandefasana: Dec-22-2020